Hetsika momba ny tatitra momba ny hetsika - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Mpianatra japoney 9 no mandray fampirantiana Holocaust amin'ny fanentanana ny fandriam-pahalemana ateraky ny areti-mifindra
Oktobra 1, 2021 0
Mpianatra any Japon dia nikarakara fampirantiana mifantoka amin'ny fiatrehana ireo fahoriana natrehin'ireo tanora teo afovoan'ny areti-mandringana tamin'ny fijerin'izy ireo ny tsy rariny nataon'ny Holocaust. [tohizo ny famakiana…]
"ITalking Across Generations on Education (iTAGe)" any Kolombia
Septambra 5, 2021 0
Fundación Escuelas de Paz dia mikarakara hetsika fifanakalozan-kevitra ho an'ny tanora Talking Across Generations on Education (iTAGe) any Kolombia momba ny andraikitry ny fanabeazana amin'ny fampiharana ny fanapahan-kevitry ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana 2250 momba ny tanora, fandriampahalemana ary filaminana. [tohizo ny famakiana…]
27 Marawi, mpampianatra LDS dia nahavita fiofanana momba ny fampianarana fandriampahalemana (Filipina)
"Ny fiofanana mandritra ny 3 andro momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana dia nanome ahy ny fahalalana sy ny fahaizana amin'ny fizarana fanabeazana ny fandriam-pahalemana. Ilaina ny fananana fiadanan-tsaina ao anatintsika alohan'ny ahafahantsika mizara amin'ny hafa, "hoy ny mpandray anjara iray. [tohizo ny famakiana…]
Ny sendikan'ny fanabeazana aziatika atsinanana dia miray hina amin'ny fanabeazana fandriam-pahalemana kalitao
Aogositra 14, 2021 0
Ny fahafantarana fa ny tantara dia matetika no diso hevitra ary matetika ny hery politika dia manelingelina ny rafi-panabeazana sy ny fandaharam-pianarana, ny mpampianatra sinoa, koreana ary japoney dia mizaha ny lasa nizara azy ireo mba hampianarana ny mpianatra ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa. [tohizo ny famakiana…]
Mamboly Hazo Moringa 10,000 XNUMX ary mamafy ny voan'ny fanabeazana fandriam-pahalemana any Asia Asia
Jolay 13, 2021 1
Tamin'ny 12 Jolay 2021, ny Center for Peace Education Manipur (India) dia nanao fanentanana mba hamboly hazo moringa mihoatra ny 10,000 any Azia atsimo atsinanana. Leban Serto, olom-banona, dia nanokana ny ezaka amin'ny Global Campaign for Peace Education (GCPE). [tohizo ny famakiana…]
Resadresaka nifanaovana tamin'i Dr. Betty Reardon momba ny Peace Education izay natolotry ny UNESCO APCEIU
Ny ivon-toeran'ny fanabeazana ho an'ny fahatakarana iraisam-pirenena any Azia-Pasifika, niaraha-niasa tamin'ny Fikambanana Koreana misahana ny fanabeazam-pirenena ho an'ny fahazoana ny fahalalana iraisam-pirenena, dia nanao dinika virtoaly niaraka tamin'i Dr. Betty Reardon tamin'ny fotoana namoahana ny fandikana ny bokin'i Korea ny boky Dr. Reardon, "Comprehensive Fampianarana momba ny fandriam-pahalemana. ” [tohizo ny famakiana…]
Mexico: ny Faculty of Education dia mandray anjara amin'ny Konferansa ho an'ny fandriampahalemana ao amin'ny Sekolin'i Hebrew Maguen David
Janoary 22, 2021 0
Nisy atrikasa iray “Miampita sy miantso anay ny fandriam-pahalemana” natao ho an'ny mpianatra amin'ny lisea avy amin'ny Maguen David Hebrew School ho ampahany amin'ny Konferansa ho an'ny fandriampahalemana. [tohizo ny famakiana…]